Kedu esi lelee valvụ ahụ mgbe a gbanye taya? -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Kedu esi lelee valvụ ahụ mgbe taya taya?
Mgbe ogologo oge gachara, ụgbọ ala m chọrọ ịmịpụ ikuku maka taya ahụ, yabụ kedu ka ị ga-esi lelee valvụ gas na nke m? Onu oriri kwesịrị ichere ruo mgbe taya ahụ ga-ajụ oyi. Ebe ọ bụ na esemokwu taya na ala ga-eme taya na usoro nke ịrị elu okpomọkụ, ikuku dị na mgbasawanye ọkụ ọkụ, njupụta dị ala, nrụgide mgbada, n'oge a nke valvụ ahụ adịghị n'ime gas na ọnụ.
Mgbe ị na-akwadebe ịkwanye ikuku maka taya ahụ, ọ dị mkpa ịlele iguzosi ike n'ezi ihe nke valvụ ahụ, ma chọpụta ma enwere nrụrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọta na ịkwesịrị iji dochie valvụ ahụ ozugbo iji gbochie nsogbu ndị ọzọ na-eme. Mgbe ị na-ejuputa, attentionaa ntị na ịdị ọcha. Enweghị ike ịgwakọta gas ahụ etinyere na oke mmiri na ụmụ irighiri mmanụ. Ozugbo ụmụ irighiri mmiri na mmanụ na-abanye n'ime taya ahụ, ọ ga-eme ka njọ na roba taya dị n'ime. Nke abuo, ịfegharị bụ ịchịkwa nke kachasị mma, obere oke nwere ike imetụta ndụ ọrụ nke ọnụ valvụ. Mgbe ị na-ehicha ọnụ valvụ ahụ, kpachara anya ka ị ghara iziga isi valvụ ahụ. Mgbe onu oriri, chọpụta ma enwere ikuku ikuku na valvụ ahụ. Mgbe ị kwenyesiri ike na ikuku ikuku, mee ka okpu valvụ sie ike iji gbochie ahụ ndị mba ọzọ ịbanye n'ọnụ ọnụ valvụ ahụ ma mee ka valvụ ahụ daa. N'aka ozo, oburu na enwere onu agha, aghaghari valvụ ahu ozugbo.
Ọ bụ ezie na ọ na-abụkarị ịkụnye taya, valvụ bụ naanị obere ngwaọrụ, mana mgbe ụfọdụ obere akụkụ na-ekpebi ọtụtụ ihe dị mkpa.
Ihe edere n'elu bụ ọdịnaya nke ọnụ valvụ ego elele mgbe taya taya. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka. Tengda valvụ ọnụ nke ụdị dị iche iche nke ọnụ valvụ, bụ shandong ógbè kasị ukwuu na-egwupụta ụgbọala na-emepụta ọnụ ọnụ, nwere mkpa ịkpọtụrụ anyị.
Previous: SUNSOUL Sales Dept No.1 Otu Gosi
Ọzọ: Vietnam AutoExpo na Jun, 6-9th.2018 Ha noi vietam expo